Ny tsipiriany rehetra momba ny Galaxy Note 20 dia voasivana | Androidsis
Ny sivana rehetra ao amin'ny Galaxy Note 20 dia voasivana
Tsy ampy tapa-bolana sisa tavela ho an'i Samsung hanolotra amin'ny fomba ofisialy ny Galaxy Note 20 vaovao, terminal iray izay, toa ny Galaxy S range, dia nanomboka 10 ka hatramin'ny 20 mivantana, handefa folo taona vaovao. Rehefa manakaiky ny andro fampisehoana dia misy ny fivoahan'ny rano mifandraika amin'ity terminal ity mivoaka hatrany amin'ny Samsung izy ireo (izay iza no tena manivana azy ireo).
Samsung dia tsy mampiavaka antsika mankaleo amin'ny famelabelarany miaraka amin'ny angon-drakitra izay tsy raharahain'ny mpampiasa firy, toy ny sasany amin'ireo famaritana azy, noho izany dia mitaky andro maromaro alohan'ny hanivanana azy ireo amin'ny haino aman-jery mba hahafantaran'ny rehetra azy tsara. Mifanaraka amin'ny fomban-drazany dia efa fantatsika ny famaritana rehetra momba ny elanelan'ny Galaxy Note 20.
1 Galaxy Note 20 famaritana
2 Fakan-tsary Galaxy Note 20
3 Avy amin'ny tanan'i Microsoft
5 Fitaovana inona indray no hasehon'i Samsung amin'ny 5 Aogositra
6 Galaxy marika 20 lite
Galaxy Note 20 famaritana
Araka ny hitantsika eo amin'ny WinFuture.de eo afovoany, ny Galaxy Note 20 vaovao, ao amin'ny kinova Ultra, dia hamboarina amin'ny efijery iray an'ny 6,9 santimetatra Super AMOLED Karazana Infinity-O miaraka amina vahaolana WQHD (3.200 × 1.440), a Taham-pamelombelona 120 Hz (havaozy izay hiova ho azy araka ny fampiharana ampiasainay), a 19.3: 9 tahan'ny, dia mifanaraka amin'ny HDR10 + ary ho smartphone voalohany eo amin'ny tsena izay mampifandray ny fiarovana Gorilla Glass 7 eo amin'ny efijery
Latency, ny fotoana ialan'ny fitaovana amin'ny S Pen milatsaka amin'ny 9 ms fotsiny, fotoana mitovy amin'ny valiny izay hitantsika amin'izao fotoana izao amin'ny Apple Pencil. Hamely ny tsena amin'ny Android 10 (mazava ho azy) fa amin'izao fotoana izao dia tsy fantatra izay kinovan'ny sosona fanaingoana no havoaka.
Amin'ny lafiny fiarovana, ny sensor sensor dia misy eo ambanin'ny efijery, mampiditra mpandahateny stereo mpandahateny avy amin'ny AKG (an'ny Samsung) ary ao anatiny no ahitantsika ny Exynos 990 / Snapdragon 865+ (miankina amin'ny tsena), RAM 12 GB, dikan-teny 256 sy 512 GB an'ny tahiry anatiny UFS 3.1 ary ny slot microSD.
Ireo masontsivana ireo hitovy izy ireo izay ho hitantsika ao amin'ny Galaxy Note 20, afa-tsy ny haben'ny efijery, izay ho 6,7 santimetatra amin'ny 6,9 amin'ny maodely Ultra.
Fakan-tsary Galaxy Note 20
Raha ny voalazan'ity haino aman-jery ity, ny fakantsary lehibe an'ny Galaxe Note 20 Ultra dia hahatratra 108 MPX miaraka amin'ny teknolojia Dual Pixel, autofocus laser, aperture of f / 1.8 ary hamela raketo horonan-tsary hatramin'ny 8k amin'ny 30 fps. Ny fakan-tsary malalaka dia hahatratra 12 MP miaraka amina f / 2.2. Ny fakantsary mamela antsika hanakaiky kokoa ny sehatra, ny telefaona, dia hanolotra zoom optika 5x miaraka amina vahaolana 12 MP.
Samsung dia voatsikera noho ny paikady ara-barotra amin'ny fampidirana ny lahatsoratra ZOOM 100x amin'ny Galaxy S20, noho izany dia nanapa-kevitra ny hanala an'io fanendrena io ary manome 50x zoom ambony indrindra. Ny fakantsary eo anoloana dia hahatratra 10 mpx miaraka amin'ny teknolojia Dual Pixel miaraka amin'ny autofocus ary hanana aperture f / 2.2.
Ireo fakantsary ao amin'ny Galaxy Note 20 dia mety hitovy afa-tsy ny sensor lehibe, ny sensor voalohany izay ho 54 MP, raha tokony ny 108 MP izay hatolotry ny maodely Ultra ho antsika.
Avy amin'ny tanan'i Microsoft
Samsung dia miara-miasa akaiky, ary matetika, miaraka amin'ny Google sy Microsoft, ka tsy mahagaga raha amin'ny fampisehoana ataon'izy ireo dia misy foana ny miresaka momba ireo orinasa ireo. Mandritra ny hetsika fampisehoana Galaxy Note 20, Samsung dia hanambara fa ity taranaka vaovao amin'ny laharana Note ity, nohamarinina hankafizany ny Project Cloud an'ny Microsoft, Sehatra filalaovan'i cloud an'ny Microsoft. Ho fanampin'izay, hambara ny fisian'ny lohateny 90 mahery izay ho hita amin'ny alàlan'ny Xbox Game Pass.
Ny Galaxy Note 20 Ultra, dia hanana refy 164.8 x 77.2 x 8.1 mm ary hankafy goavambe Batterie 4.500 mAh. Ity modely ity, toy ny Note 20, dia hifanaraka amin'ny mamaly haingana hatramin'ny 45W, mazava ho azy fa hifanaraka amin'ny famandrihana tsy misy tariby ary hamela ny famandrihana fitaovana hafa avy ao ambadiky ny terminal.
Mikasika ny fanoherana ny rano sy ny vovoka, ity terminal ity dia mahazo ny fanamarinana IP68. Tamin'ny fotoana nanombohany, ho hita amin'ny loko Mystic Back sy Bronze. Mikasika ny refy sy ny fahaizan'ny batterie an'ny Galaxy Note 20 dia mila miandry andro vitsivitsy isika hahalala azy ireo, saingy azo antoka fa mialoha ny fampisehoana ofisialy sy an-tserasera izay hankalazan'ny Samsung amin'ny 5 Aogositra ity.
Fitaovana inona indray no hasehon'i Samsung amin'ny 5 Aogositra
Andro vitsy lasa izay, ny lehiben'ny fizarana finday Samsung dia nanambara fa nandritra ny hetsika, Fitaovana mahery vaika 5 izay hanova ny fiainantsika no haseho (Ity farany dia mihoa-pefy, na dia azo inoana aza fa nentin'ny hafanam-po izy). Ho fanampin'ny Galaxy Note 20, ny Galaxy Fold 2, izay ny zava-baovao ananany dia hita ao anaty rafitra vaovao mamoritra (mitovy amin'ny hitantsika ao amin'ny Galaxy Z Flip) sy ny fitomboan'ny haben'ny efijery ivelany.
Raha mamela ny smartphone sokajy isika, Samsung dia hanolotra ny Galaxy Tab S7, takelaka avo lenta vaovao mifanentana amin'ny S Pen ary hahafahanay araraoty tsara ny saintsika ary ny fidirana amin'ny ekosistema Samsung.
Raha miresaka momba ny akanjo azo entina isika dia miresaka Velona ny tsimoka Galaxy, Headphone vaovao tsy misy tariby an'ny Samsung izay, sambany, dia hampiditra rafitra fanafoanana ny tabataba miasa miaraka amina endrika tena mampiavaka azy, satria tsy miditra amin'ny trano fandraisam-peo izy ireo.
Ny fitaovana azo ampiasaina hafa, na azo itondra (izay tianao hiantsoana azy) izay haseho amin'ity hetsika ity dia ny Galaxy Watch 3, ny filokana vaovao an'ny orinasa Koreana ho an'ny sehatry ny fitafiana avo lenta, miaraka amin'ny famaranana premium ary asa maro.
Galaxy marika 20 lite
Samsung nandefa ny Galaxy marika 10 lite, fihenam-bidy sy kinova fampisehoana an'ny Galaxy Note 10 izay natolotra tamin'ny volana aogositra 2019. Ny antony mampihemotra ny fandefasana ity kinova Lite ity dia mety noho ny fihenan'ny vidin'ny singa raha oharina amin'ny nanombohana azy teny an-tsena ankoatry ny fampiasana processeur taloha fa tsy ny farany modely misy eny an-tsena amin'izany fotoana izany.
Hanomboka amin'ny hetsika iray ihany ve ny Galaxy Note 20 Lite? Azo inoana fa tsia, noho izany dia tsy maintsy miandry isika amin'ny fiandohan'ny taona manaraka, raha toa ka miaraka ny fivarotana an'ity kinova Galaxy Note ity, satria raha tsy izany, Samsung dia tsy handany loharano amin'ny maodely izay zara raha afaka manana outlet amin'ny tsena, fanapahan-kevitra horaisin'ny orinasa rehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Ny sivana rehetra ao amin'ny Galaxy Note 20 dia voasivana
Microsoft dia mampiseho ny interface ho avy amin'ny fampiharana Office ho an'ny finday sy ny birao